Global Voices teny Malagasy » Mamàka Ao Gambia Ireo Mariky Ny Lalàna Silamo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Janoary 2016 9:26 GMT 1	 · Mpanoratra Demba Kandeh Nandika Tantely
Sokajy: Afrika Mainty, Gambia, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika
Ny Filohan'i Gambia Yahya Jammeh miteny manoloana ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana ny 24 Septambra 2013. Sarin'ny Firenena Mikambana avy tamin'i Erin Siegal. Nampiasaina ambany fahazoandàlana Creative Commons BY-NC-ND 2.0.
Mipoitra any Gambia ny ampahany amin'ireo fototry ny lalàna Silamo, telo herinandro monja taorian'ny nilazan'ny filoha fa fanjakàna Silamo ity firenena betsaka Miozolmana ity.
Tahirim-pivorian ‘ny governemanta sendra tafaporitsaka no manome baiko ireo lehiben'ny departemantam-panjakana sy ireo masoivoho mba hanaraka tsara fa mampiasa “sarondoha ary hanarona tsara ny volony mandritra ny ora fiasàna” “ireo vehivavy mpiasa .”
Tsy nanazava ireo anton'ilay fiovàna ilay rakitra fa kosa nampitandrina fa “antsoina hanaraka tsara io fepetra vaovao io” ny rehetra.
Ny 12 Desambra, nanambara  ilay firenena ho fanjakàna Silamo ny filoha Yahya Jammeh saingy nanampy haingana kosa fa ho fanjakana hahay handefitra io.
Nomarihany manokana fa tsy hisy fanerena amin'ny fitafiana anaovana ary hajaina ireo mpanaraka antokom-pivavahana hafa, izay manodidina ny 10%-n'ny vahoaka:
Ho fanjakana Silamo iray manaja ireo zon'ireo olom-pirenena isika. Ianareo izay Silamo mitoera ho Silamo, manaraka ny fivavahana araka ny Kôrana sy ny Sunna an'i Muhammad Mpaminan'ny Silamo , ary avelao koa ireo Kristianina hanaraka ny fomba fanaovany azy.
Tamin'ny hàfany rehefa Taombaovao, mbola nanantitra  ihany ny fanambaràny ny fanjakana Silamo i Jammeh, niantso ireo olom-pirenena hanaraka tsara ny Finoana Silamo sy ho olom-pirenena tia tanindrazana:
Vao haingana, nilaza an”i Gambia ho fanjakana Silamo sy repoblika aho, nifototra tamin'ny naha maro an'isa ireo Gambiana Silamo ary ny filàna ny hitahirizana ny maha-Silamo sy ny fanantenana hisian'ny fiarahamonina tena Silamo marina, izay hiarovana sy hanajàna ireo zon'ireo olom-pirenena rehetra. Amin'izany fanajana izany, miantso ireo Silamo sy Kristianina aho mba hiara-hiaina ao anatin'ny filaminana hatrany, ary hiasa miaraka ho an'ny soa iombonan'ny firenena na eo aza ny tsy fitoviantsika amin'ny fiaviana sy fiteny.
Ny 6 Janoary, nitsidika ny Tranom-panjakana ireo Tomponandraikitry ny Filankevitra an-Tampon'i Gambia Silamo (GSIC) sy ireo Zokiolon'ny Silamo Banjul , mba haneho  ny “fankasitrahany sy ny fanohanany” tamin'ny fanambaràna Ny Gambia ho fanjakana Silamo.
Notaterin'ny media teo an-toerana ho nilaza izao Atoa Muhammad Lamin Touray, Filohan'ny GSIC sady Imam an'ny Maoske ao amin'ny Tranom-panjakana:
Tonga eto izahay androany mba haneho ny fankasitrahanay ny Filoha Jammeh tamin'ny fanapahankeviny hanao an'i Gambia ho repoblika Silamo. Mahita izany zavatra izany ho toy ny fanampiana manokana ataon'i Allah amin'ny firenena sy ny vahoaka ny GSIC, ireo Zokiolon'ny Silamo Banjul ary Ny vondrom-piarahamonina Silamo ao Gambia.
Somary sarotsarotra ho an'i Jammeh ihany ireo fihetseham-po tamin'ireo fivoarana ireo.
Ary ity no hadisoana goavana indrindra mety ho vita. Mivonona amin'ny fanitsakitsahana misimisy kokoa ny #humanrights (zon'olombelona) avy ao #Gambia 😨
Nampitandrina izao i Maryam Namazie, Iraniana laika ary mpiaro ny zon'olombelona:
Mangataka vehivavy ireo mpiasam-panjakana hanao Hejab i Gambia ankehitriny. Toy izany ihany koa no niantombohany tany Iràna .
Nitaraina izao i Rawlings Datir:
@KaylaMegwa: Raha mieritreritra zavatra tsaratsara kokoa ireo firenena any amin'ny tanibe hafa, #Gambia indray miverina any aoriana ary manao izay mahamenatra an'i Afrika. TSY MISY DIKANY!
Sait Matty Jaw , Gambiana mpahay tantara, nanoratra asa soratra lava mikasika ny fifampidikidiran'ny fivavahana sy ny politika tao amin'ny firenena hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantena, ary nampitandrina ny fanindrahindràna ny fivavahana Silamo haingana loatra ao Gambia:
Voalohany aloha, fanambaràna tsotra iny nilaza fa Fanjakana Silamo i Gambia, tsy mieritreritra akory ny ao anatin'ny lalàna an-tampontsika (ny lalàmpanorenana). Nandrahona ny hanova ny sainam-pirenena mihitsy aza izy, izay efa nisy nialoha ny nisiany teto an-tany mihitsy. Ny sasany tamintsika nihomehy ary nilaza fa tsy hisy mihitsy izany… efa misy Baiko Mihatra any izao manery ireo vehivavy sivily mpiasam-panjakana mba hanarona ny volony any am-piasana. Nandritra ny fanambaràna/filazàna an'i Gambia ho Fanjakana Silamo, nilaza mazava i Jammeh fa tsy hanondro olona ho polisin'ny Fanjakana Silamo; hoe tsy hisy fanamiana tsy maintsy arahana, ary hoe tsy hisy fiantraikany amin'ireo tsy Silamo any Gambia io fiovàna io. Inona no hanaraka aorian'io ?
Raha nampiditra ny fampiasàna voaly i Gambia, ireo firenena hafa ao amin'ny faritra, toa an'i Kamerona, Gabon, TChad ary Kôngô Brazzaville kosa, nandrara  ny fampiasàna ny fanaronana loha eny amin'ireo toerana ho an'ny daholobe.
Tsy nanao na inona na inona moa hatreto ny biraon'ny filoha mikasika ilay tatitra tafaporitsaka. Ao amin'ny firenena izay mbola nofinofy lavitra takarina aloha ny fahalalahan'ny fanaovana gazety sy ny fahazoana loharanom-baovao, nandray ny fotokevitra “miandry dia ho hita eo izay tohiny” ireo mpanaramaso.
Ho an'ny maro, miketriketrika isam-bato fotsiny ny filoha, satria manomana ny hahazo ny fe-potoam-piasàna fahadimy eo amin'ny toerana maha-filoha azy izy amin'ireo fifidianana ho filoham-pirenena hatao ny volana Desambra 2016.
Ireo sasany kosa milaza fa mitodika any amin'ny tany Arabo izy satria nampiato ireo vola fanampiany ireo mpanome fanampiana iraisampirenena, toy ny Vondrona Eoropeana, tao anatin'ireo fanitsakitsahana faobe ireo zon'olombelona.
Na inona na inona antony, toa hita ho hentitra kokoa noho ny tany aloha i Jammeh hoe ho an'ny tombotsoan'ireo Gambiana rehetra ireo hetsika nataony sy ireo fepetra napetrany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/10/78120/
 mba haneho: http://observer.gm/muslim-leaders-express-support-for-islamic-republic-declaration/
 Sait Matty Jaw: https://advox.globalvoices.org/2014/11/10/blogger-and-womens-rights-activist-detained-in-the-gambia/